२०२१-२०२२ सिजन को दौरान खेल हेर्न को लागी? | ग्याजेट समाचार
सेप्टेम्बर सामान्यता मा फिर्ता संग पर्यायवाची छ, धेरैजसो खेलहरुमा पनि। खेल प्रतियोगिताहरु सामान्यतया आफ्नो सम्बन्धित सिजन सुरु वा यसको साथ जारी। तेसैले तपाइँ कुनै पनी याद गर्नुहुन्न, बाट ग्याजेट समाचार हामी तपाइँ कहाँ तपाइँ २०२१/२२ सीजन मा मुख्य खेल प्रतियोगिताहरु देख्न सक्नुहुन्छ बताउन जाँदैछौं.
सामान्यतया तपाइँ अगस्ट को अन्तिम पखवाडा मा फुटबल हेर्न शुरू। त्यहाँ मात्र एक अपवाद छ कि यो क्यालेन्डर मा मिति मा सार्न बनाइएको छ र यो COVID संग पछिल्लो बर्ष थियो। यो सिजन मा अझै पनी महामारी को अवशेष छ तर केहि हद सम्म। अनुकूल विकासले जनतालाई स्टेडियममा फर्कन अनुमति दिनेछ, यद्यपि हो, अहिले को लागी, सीमित क्षमता संग।
तेसैले यदि तपाइँ ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जो टिकट किन्न पाउनुहुन्न, तपाइँ आश्वस्त रहन सक्नुहुन्छ किनकि तपाइँ यी सबै दरहरु संग टेलिभिजन मा लालिगा हेर्ने विकल्प जारी राख्नुहुनेछ कि उनीहरु हामीलाई बताउँछन्। रोम्स। यस बर्ष अघिल्लो बर्ष को समीकरण दोहोरिएको छ। Movistar र सुन्तला मात्र अपरेटरहरु जसको साथ तपाइँ आफ्नो कन्भर्जेन्ट प्याक को माध्यम बाट फुटबल हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्यूजन र प्रेम दर, क्रमशः।
को मामला मा बास्केटबलयो प्रतियोगिता को स्तर मा निर्भर गर्दछ। यदि यो एक हो यूरोपीयन प्रतियोगिता Euroleague, बास्केटबल च्याम्पियन्स लीग वा Eurocup जस्तै, तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ DAZN मार्फत; जबकि एन्डेसा लीगMovistar मा, जो एक यो च्याम्पियनशिप को प्रसारण अधिकार छ।
अन्य खेलहरुको बारेमा के?
मोटर मा, रानी प्रतियोगिताहरु सूत्र १ र MotoGP छन्। जे होस् ती च्याम्पियनशिपहरु को लागी केहि महिना मात्र जान को लागी छ, तपाइँ अझै पनी अन्तिम प्रहार को लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। वास्तव मा, यदि तपाइँ यो सही सवारी, तपाइँ सक्नुहुन्छ सिजन को बाँकी को आधा पुरा तरिकाले नि: शुल्क हेर्नुहोस्। कारण यो हो कि DAZN २०२२ सम्म प्रसारण अधिकार पायो र एक महिना को एक नि: शुल्क परीक्षण अवधि छ। र, तपाइँ के रुचाउनुहुन्छ, तपाइँ मासिक वा वार्षिक रूपमा प्लेटफर्म को सदस्यता लिने सम्भावना छ।
साथै, Movistar DAZN संग एक सम्झौता पुग्यो, त्यसैले तपाइँ पनि नीलो अपरेटर को माध्यम बाट इन्जिन सामग्री देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोटर टिभी प्याकेज, जो दुई फ्यूजन दर (फ्यूजन प्लस र फ्यूजन कुल प्लस ४ लाइनहरु) मा मूल्य मा शामिल छ मा शामिल छ। फ्यूजन दरहरु को बाकी मा, तपाइँ उच्च प्याकेज को लागत तिर्नु पर्छ।
इटालियन शहर Trento मा यूरोपीयन च्याम्पियनशिप को साथ मा साइकल चलाने को लागी वर्तमान मा पूरा जोर मा छ। तेसैले यदि तपाइँ यो खेल को एक प्रेमी हो, तपाइँ DAZN को माध्यम बाट सबै साइकल दौड हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लेटफर्म दुई Eurosport च्यानलहरु (Eurosport 1 र Eurosport 2), जो सबै साइकल को लागी प्रसारण अधिकार छ। वास्तवमा, Eurosport च्यानल १ पनि सुन्तला, भोडाफोन वा भर्जिन टेल्को जस्ता कम्पनीहरु भित्र छ.
सम्भावना पनि छ योइगो, Movistar, Guuk वा MásMóvil को रूप मा अपरेटरहरु संग साइकल यात्रा हेर्नुहोस्। यस अवस्थामा, DAZN को साथ, जुन यसको केहि दरहरु मा सीधा मूल्य मा र अन्य मा शामिल छ, एक उच्च लागत तिर्नु पर्नेछ।
टेनिस संग यो साइकल संग जस्तै छ। निस्सन्देह, प्रतियोगिता मा निर्भर गर्दछ तपाइँ यो एक ठाउँ वा अर्को मा हुनेछ। चार ग्रान्ड स्लैम मध्ये तीन (रोल्याण्ड ग्यारोस, यूएस ओपन र अस्ट्रेलियन ओपन) Eurosport १ मा देखिएका छन्, योइगो, MásMóvil, Gukk, Movistar, Orange, Vodafone वा Virgin Telco र DAZN मा अपरेटरहरुमा उपलब्ध छन्। यसको भाग को लागी, Movistar मा विम्बल्डन, जो एक जो दृश्य दृश्य अधिकार किनेको छ। मास्टर 1, 1000 र 500 जस्तै कम प्रतियोगिताहरु बाट, पुरुष Movistar मा देखीन्छ र DAZN मा महिलाहरु।
खेल त्यहाँ धेरै छन् र उनीहरुलाई देख्ने तरिकाहरु। अब तपाइँ मात्र खेल को छनौट गर्न को लागी तपाइँ सबैभन्दा मनपराउनुहुन्छ र अर्को सिजन को समयमा यसको आनन्द लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » यो सिजनमा खेल कहाँ हेर्ने?